Madaxweynaha dalka oo booqanaya Ingriiska | Star FM
Home Wararka Kenya Madaxweynaha dalka oo booqanaya Ingriiska
Madaxweynaha dalka oo booqanaya Ingriiska
Madaxweynaha dalka Uhuru kenyaatta ayaa usbuucan booqasho ku tagi doona qaarada Europe.
Wakiilka Sare ee Kenya u fadhiya Boqortooyada Ingiriiska (UK) Manoah Esipisu ayaa sheegay in booqashada madaxweyne Kenyatta ee todobaadkan uu ku tagayo wadanka Ingriiska looga gol leeyahay xoojinta iskaashiga istiraatiijiyadeed ee Kenya iyo UK.
Amb Esipisu oo saxaafada kula hadlayey magaalada London kahor imaatinka Madaxweynaha ayaa sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee booqashada hogaamiyaha Kenya ay noqon doonto inuu si wada jir ah ula shir gudoomiyo Shirka Caalamiga ah ee Waxbarshada kaas uu qeyb ka yahay Raysulwasaaraha Ingriiska Boris Johnson.
Shirkan ayaa dhici doona 28-ka iyo 29-ka bishan July.
Waxaana shirkaas lacag aruurin loogu sameyn doona maalgashiga waxbasrahada iyo malaayiin carruur ah oo aan waxbo heysan.
Previous articleXisbiga Wiper oo isaga baxaya isbahaysiga NASA
Next articleDHAGEYSO:Shacab lagu xasuuqay magalada garba ciise ee deganka Somalida